Baijiu စျေး China Manufacturers & Suppliers & Factory
Baijiu စျေး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Baijiu စျေး ထုတ်ကုန်များ)
ကောင်းသော technique ကိုကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ သဘာဝကပစ္စည်းများ ယူ. , mellow အမွှေးအကြိုင်, အရည်အသွေးမြင့်စပါး, လက်ရာလက်ဘီယာအရက်ချက်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူရပါတယ်။ ကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုမသောက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ရေငတ်ခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းခံစားရဆဲလန်းဆန်းနေဖို့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့...
အမြင့်မားဆုံးအရက်ရာခိုင်နှုန်း Baijiu: စပျစ်ရည်ကိုအိုးတလုံးပူနွေးလာမှုအချိန်ကာလတစ်ခုအထိခံစားရသည်။ စပျစ်ရည်, ကဗျာနှင့်အိပ်မက်တရုတ်၏စပျစ်ရည်၌တွေ့နိုင်ပါသည်။ သည်ဖြည်းဖြည်းနှင့်ယစ်မူးစပျစ်ရည်ကိုတစ်ဦးမူးယစ်အမွှေးအကြိုင် emitting, အချိန်ရဲ့သက်သေဖြစ်ပါတယ်။ လေတိုက်ခြင်းနှင့်မိုးရွာမည်တွေ့ကြုံခံစားသည်လူ့ယဉ်ကျေးမှုသက်သေခံ။...
အင်အားအကောင်းဆုံးအရက်မွှေးကြိုင် Baijiu: ကျနော်တို့ Baijiu အရက်အကြောင်းအရာ 36,5 ရောင်းချ, Baijiu အရက်အကြောင်းအရာ 42 Baijiu အရက်အကြောင်းအရာ 46, Baijiu အရက်အကြောင်းအရာ 52, Baijiu အရက်အကြောင်းအရာ 56, Baijiu အရက်အကြောင်းအရာ 60 ပြီးတာနဲ့ကိုမြည်းစမ်း, တစ်ချိန်ကချစ်တော်မူ၏။ စပျစ်ရည်ကိုတစ်အိုးနွေး,...
စပျစ်ရည်ကိုအစည်းအဝေးဒီတော့အဖိုးတန်ဖြစ်ပါသည်, မိမိကိုယ်ကိုနှစ်သက်ယစ်မူးသည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်စိုးရိမ်အကြောင်းကိုမေ့လျော့ချင်လျှင်, အ Kaoshang သောက်ရနိုင်သည်ကိုကဆိုသည်။ စပျစ်ရည်ကိုပိုပြီးမမေ့နိုင်သောဖြစ်ပါသည်, မြေအောက်ခန်းအမွှေးအကြိုင်အမွှေးအကြိုင်သဟဇာတဖြစ်ပြီး, ချမ်းသာသည်ချို၏,...
မွှေးကြိုင်မြင့်မားသောအရက်အကြောင်းအရာ Baijiu: ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျနော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်အကြောင်းကိုမေ့လျော့ချင်လျှင်, အ Kaoshang သောက်ရနိုင်သည်ကိုကဆိုသည်။ စပျစ်ရည်ကိုပိုပြီးမမေ့နိုင်သောဖြစ်ပါသည်, မြေအောက်ခန်းအမွှေးအကြိုင်အမွှေးအကြိုင်သဟဇာတဖြစ်ပြီး, ချမ်းသာသည်ချို၏,...
တစ်မူထူးခြားသောကုမ္ပဏီစိတ်ထားနှင့်အတူအရက်တစ်ပုလင်းသူတို့ကိုမှုးမတ်များနှင့်ပတ်သတ်ပြီးဆုံးသောခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမျက်မှန်နှင့်ကင် Clinking, သင်နှင့်ငါကြားအကွာအဝေး ပို. ပို. နီးစပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်, ထို့နောက်သင် market.Enough အရှိန်အဟုန်၏အခွင့်အလမ်းများကိုအမိအရဆုပ်ကိုင်ဖြစ်စေလျက်, ဂုဏ်ထူး,...
ညစာစားပွဲသည်မွှေးကြိုင်တရုတ် Baijiu: ရမှာပေါ့ကြည်လင် texture, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပွင့်လင်း, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ aftertaste အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာ, အလွှာ Bloom, ပျော့ပျောင်းသောချိုမြိန် mellow ပေါ်မှာအစွန်အဖျားအလွှာလျှာအတွက်အမွှေးအကြိုင်နှင့်အတူ, ကတစ်ခွက်ကိုသောက်သုံးပြီးနောက်, aftertaste...
အမြင့်အရက်အကြောင်းအရာမွှေးကြိုင် Baijiu: ကျွန်တော်ခွက်ကိုလုံ့လဝီရိယနှင့်ပညာ၏ crystal ဖြစ်၏ တိုင်းခွက်ကို mellow နဲ့ရိုးရိုးအရသာနှင့်ပြည့်ဝ၏။ အဟောင်းစပျစ်ရည်ကိုမွှေးဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုအချိန်အမွှေးအကြိုင်ကျော်, ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်းကာလကိုတစျဆငျ့, အချိန်ရဲ့စမ်းသပ်မှုရပ်ပေးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ Baijiu အရက်အကြောင်းအရာ...
Volume ကို 60 တို့ကတရုတ် Baijiu
Volume ကို 60 တို့ကတရုတ် Baijiu: baijiu အကြောင်းအရာကိုသင်တို့သတိထားမိပထမဦးဆုံးအရာအနံ့ရှိ၏ ကအရသာလမ်းကိုရမ်သို့မဟုတ် Tequila တန်ခိုးမျုိးတို့အားလက် doesn`t ။ ပုံမှန်အားဖြင့်သွန်းလောင်းအစေခံရန်အသုံးပြုတဲ့မြိန်စွာ ပတျသကျ. အလှနျသေးနုမျက်မှန် Gusto နှင့်အတူပြုလုပ်-in...
Baijiu တရုတ်ဝိညာဉ် 60abv
Baijiu တရုတ်ဝိညာဉ် 60abv: ကောင်းမွန်သော technique ကိုကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ သဘာဝကပစ္စည်းများ ယူ. , mellow အမွှေးအကြိုင်, အရည်အသွေးမြင့်စပါး, လက်ရာလက်ဘီယာအရက်ချက်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူရပါတယ်။...
ကျနော်တို့ညစာပါတီများအတွက်မြင့်မားသောအရက်အကြောင်းအရာ Baijiu ရောင်းချ: အဆိုပါဟောင်းသောစပျစ်ရည်မွှေးဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုအချိန်အမွှေးအကြိုင်ကျော်, ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်းကာလကိုတစျဆငျ့, အချိန်ရဲ့စမ်းသပ်မှုရပ်ပေးနိုင်သည်။ တိုင်းခွက်ကိုလုံ့လဝီရိယနှင့်ပညာ၏ crystal ဖြစ်၏ တိုင်းခွက်ကို mellow နဲ့ရိုးရိုးအရသာနှင့်ပြည့်ဝ၏။...
ကျနော်တို့ 36,5%, 42%, 52% အရက်အကြောင်းအရာတရုတ်အရက်များရှိသည်။ စပျစ်ရည်ကိုအစည်းအဝေးဒီတော့အဖိုးတန်ဖြစ်ပါသည်, မိမိကိုယ်ကိုနှစ်သက်ယစ်မူးသည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်စိုးရိမ်အကြောင်းကိုမေ့လျော့ချင်လျှင်, အ Kaoshang သောက်ရနိုင်သည်ကိုကဆိုသည်။ စပျစ်ရည်ကိုပိုပြီးမမေ့နိုင်သောဖြစ်ပါသည်,...
Baijiu စျေး Baiju စျေး Baijiu အရက် Baijiu အမေဇုံ Baiju သောက်